Fact check – Page7– MySansar
आइतबार राति एकाएक एउटा खबर तीव्र रुपमा फैलियो- नेपालमा पनि कोरोना भाइरस लाग्यो। टेलिभिजनमा ब्रेकिङ न्युज चल्न थाले- वीरगञ्जमा एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटियो। नाम चलेका अनलाइनहरुले नै लेख्न थाले- वीरगञ्जमा एक जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। अझ गोपनीयताको हकको हनन् गर्दै बिरामीको नाम समेत फुक्न थाले, अनलाइनमा हाल्न थाले। पछि बल्ल थाहा भयो,… Continue reading
सामाजिक सञ्जालमा एउटा खबर निकै सेयर भइरहेको छ। त्यसमा भनिएको छ- कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपायका रुपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले करिब ८ सय बाघ र सिंहलाई सडकमा खुल्ला छाडिदिएका छन्। नागरिकहरु डराएर घरबाट ननिस्कून् भनेर त्यसो गरिएको रे। साथमा एउठा सडकमा एउटा सिंह हिँडिरहेको फोटो पनि छ। विश्वासिला मानिने वरिष्ठ पत्रकारहरुबाट नै यो खबर सेयर… Continue reading
Posted on March 21, 2020 March 21, 2020 by Salokya
फेसबुकमा अहिले कोरोना भाइरससम्बन्धी एउटा अर्को मेसेज भाइरल भइरहेको छ। यो मेसेज टेक्स्ट र अडियो दुवैमा छ। टेक्स्टमा आज राति १२ बजे नेपाल भर आर्मी हेलिकप्टरले आकाशबाट कोरोना भँइरसविरुद्ध किटनाशक औषधि छर्कने हुनाले घर बाहिर ननिस्कन र कपडा र अरु कुरा बाहिर नराख्न भनिएको छ। त्यसैगरी अडियोमा एक महिला आवाजमा त्यही कुरा भनेको सुन्न पाइन्छ।… Continue reading
“अँ हिमाल, तिमीलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सुनाउन फोन गरेको है” यी वाक्यबाट सुरु हुने पुरुष आवाज रहेको अडियो तपाईँले पनि फेसबुकको मेसेन्जरमा पाउनु भयो होला। त्यो मेसेजमा नर्भिक अस्पतालमा ९ जनालाई चेक गर्दा ६ जनालाई कोरोना भाइरस देखाएको र नेपालमा एकदमै फैलिसकेको भन्दै आतंक मच्चाउन खोजिएको छ। उसले यो कुरा फेक हैन है भनेर… Continue reading
Posted on March 15, 2020 by Salokya
कोरोना भाइरस प्यान्डेमिक सँगै अहिले सोसल मिडियामा अर्को एउटा संक्रमण पनि बढ्दो छ- इन्फोडेमिक अर्थात् सूचना संक्रमण। कोरोना संक्रमण भएको होस् या नहोस् सूचना संक्रमणले चाहिँ तपाईँले भेट्टाउन सक्छ। त्यसैले सावधान रहनु होला। तपाईँको फेसबुक वालमा वा ग्रुपहरुमा, मेसेजमा एउटा खबर देख्नुभएकै होला- टेकुमा परीक्षण गरेका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भेटियो शीर्षकमा। नाम नसुनेका अनलाइनहरुमा… Continue reading
आज सोसल मिडियामा म्याग्दीको तातोपानीमा डुबुल्की लगाउनेहरुले मास्क लगाउँदै गरेको फोटो राखेर त्यसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जोडेर ‘मूर्खहरु’ भन्दै आलोचना भइरहेको तपाईँले धेरै देख्नुभयो होला। सोसल मिडियामा ती फोटोहरुको स्रोत आजको कान्तिपुर दैनिक हो। आजको कान्तिपुर दैनिकको पाँचौँ पेजमा महामारीको घोषणासँगै सतर्कता बढाइयो शीर्षकको समाचारमा एउटा ठूलो फोटो राखिएको छ, जसको क्याप्सनमा पोखरीमा मास्क अनिवार्य… Continue reading
ट्रम्प, मोदी र ज्ञानेन्द्रको भेट? फेक न्युज हो कि साँच्चै? : फ्याक्टचेक
Posted on February 27, 2020 February 27, 2020 by Salokya
फणिराज पाठक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका संवाद सचिव हुन्। ज्ञानेन्द्रका आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र जानकारीहरु उनीमार्फत् जारी हुन्छन्। उनको फेसबुकबाट पनि त्यस्ता जानकारी प्रवाह हुन्छन्। उनै पाठकको फेसबुकमा बुधबार एउटा सनसनीपूर्ण लिङ्क सेयर भयो। माथि त्यसको स्क्रिनसटमा तपाईँ देख्नसक्नुहुन्छ- भनिएको छ कि भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र ज्ञानेन्द्रको भेट… Continue reading
यो फोटो हेर्दा तपाईँलाई केही अनौठो लाग्यो? यसमा सेतो धुँवा छाड्दै एउटा विमान आकाशमा उडिरहेको देखिन्छ। यो फोटो मैले अस्ति भर्खर मंगोलिया जाँदा त्यहीँको आकाशमा खिचेको हुँ। एकदम चीसो मौसम हुने मंगोलियाको आकाशमा यो सामान्य दृश्य हो। कहिलेकाहीँ त दुई वटा यस्ता सेता धर्कासहित विमानहरु उडिरहेका हुन्छन्। यस्तै दृश्य जब काठमाडौँमा देखियो, तब के भयो… Continue reading